Wednesday November 30, 2016 - 03:03:30 in Articles by Super Admin
Hooyadood ayaa habeen kasta labada gabdhood ku tartansiiin jirtay labo su'aal, iyadoo abaal marin jirtayna tan guuleysata. Waxeyna weydiin jirtay haddaad weynaato maxaad qaban doonta? Haddii lagu yiraahdo la hadal dad fara badana maxaad u sheegi lahayd, noo aqri qudbadda aad u jeedin lahayd.
Habeen kasta halkaas ayey ku tartami jireen, taasina waxey sababtay in gabdhihii cod kar noqdan, marka labaad na iney ka fikiraan waxa ugu weyn ee la sameyn karo (iney hanyeeshaan). Waxbarasho badan iyo jaamacado ay ka diyaarisay culuumta maamulka iyo maareynta kadib, waxey waxbarashada daraasadda sare ka heshay dalka Mareykanka, Jaamacadfa Yale. Si ay u dabbarto qarash ka ku baxaya waxbarashadeeda iyo nolosheeda, habeenkii ayey ka shaqeyn jirtay Hotel, qeybtiisa soo dhaweynta.
Markey jaamacadda dhammeysay ayey codsatay shaqo, iyadoo lacagtii ugu badneedna ku bixisay, labis, shaqadiise waaloo diidey, sababta oo ah sulwaal keeda oo anqawga dhaafayey. Waxey u sheegtay macallin keeda jaamacadda, wuxuuna kula taliyey iney xirato wixii ay ku qanacsantahay, hadda kadib.
Shaqadii labaad saari ayey ku labisatay, oo ah dhaqan keeda, waana heshay. Meesha ay shaqada kowaad ka heshay rag ayaa u badnaa sidaas darteed waxey isku dayday iney shaqeyso ka badan inta la shaqeeyo, sababta oo ah marka kowaad waa dumar, marka xigtana dalka uma dhalan, taasina waxey keentay in abaal marin badan la siiyo, kana soo dhex muuqato shaqaalihii kale.
Lix sano kadib waxey ku biirtay shirkadda Mobile da ee Motorola, iyadoo ka noqotay madaxweyne ku xigeen ka qeybta qorsheynta iyo ganacsiga. Afar sano kadib 1994, waxey usoo wareegtay shirkadda cabitaan ka ee PEPSI, halkaas oo ay muddo 7 sano ah ka shaqeyneysay, markii dambana ay ka noqotay madaxweynaha shirkadda ugu sareeya. Markey shirkadda la wareegtay sanad kii u horreeyey, waxey abaal marin u heshay $13.9 milyan oo kaash ah, mushaar keeduna uu san ku jirin, kadib markii ay dhintay, qarashaad dhan 1 Bilyan, oo shirkadda si macno darro ah uga bixi jiray.
Indra Nooyi waxey maamusha hanti dhan $69.667 bilyan,shaqaale gaaraya 263,000 kun iyo 143 xarumood oo ku yaalla 140 waddan, waxeyna faa'iido usoo xareysaa 63.06 bilyan sanad kii. PEPSi waa shirkadda 4-aad ee dunida ugu weyn. Indra waxey tira ka seddex jeer kasoo muuqatay liis ka dad ka dunida ugu saameeynta badan, iyadoo sanadkii lasoo dhaafay uu u doortay wargeyska TIMES shaqsiyadda sanadka.
Mushaar keedu waa $18.6 milyan sanadkii, oo ay ka madax bannaan tahay wixii gunno ah, sidaas ay tahay weli Indra waa xaas, waa hooyo, waana gabar ka war haysa waalid keeda iyo reer keedaba. Waxey aaminsantahay falsafadda ah dumar majiro, ragna ma jiro, ee waxaa jira qof alle abuuray, lana siiyey fursadda la siiyey asaagiis, isagana ay ku xirantahay wuxuu iska dhigo iyo siduu nolosha u qaabeysto.
Xukunka Arbaco ayuu qabsaday,? xilka Arbaco ayuu la wareegay ? Full Article